Farmaajo iyadoo la jecel yahay miyaad aragtay mise waad ogtahay meesha uu jaceylkaas ka keenay? - Caasimada Online
Home Maqaalo Farmaajo iyadoo la jecel yahay miyaad aragtay mise waad ogtahay meesha uu...
Farmaajo iyadoo la jecel yahay miyaad aragtay mise waad ogtahay meesha uu jaceylkaas ka keenay?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa Dhawaan madaxweynaha Soomaaliya noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaasoo muddaba ay ku fakrayeen shacabka Soomaaliya inay mar uun sidaas dhacdo waxayna riyadaas rumowday 08 February 2017.
Haddaba waxaa muuqato in madaxweynaha ay jecel yihiin 95% shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta intooda badan, waxaana is waydiin mudan sidee ku dhacday shaqsi 6 bil xil ka qabtay Soomaaliya inuu helo kalsoonidaan iyo taageerada intaan la leg.
Haddaba caasimadda Online ayaa u baaritaan kusoo sameysay jaceylka Farmaajo loo qabo halka uu asal ahaan ka imaaday waxayna hoos kusoo koobeysaa arrintiisa oo kooban iyo asal ahaan halka uu jaceylka ka keenay.
Maxamed aabihiis Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ah Zaciim naxariis badan dadkana aad ay u jecel yihiin wuxuuna dowladii Siyaad Barre kasoo qabtay shaqooyin.
Aabihiis ayaa usoo haajiray Muqdisho horaantii sanadki 1950 halkaas ayuuna ku nagaaday aabihiis ilaa uu dowladda uga qabto shaqooyin badan.
Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa heysta naaneysta (Farmaajo) oo asal ahaan ka timid ereyga (Fromaggio) oo ah kalimad Talyaani ah oo loo yaqaan waxyaabo macmacaan ah oo laga sameeyo Subagga caanaha lana soo marsiiyo warshad waxaana soomaaliya keeni jiray gumeystihii Talyaaniga.
Balse markii la sameenayey qaamuuska afka Soomaaliga ayaa ereygii loo badalay (Famaajo) oo macno ahaan ah (Mid la jecel yahay) ama (Xalwo).
Waaya aragii hore ayaa isku khilaafay sababta keenta in Oday Cabdullahi oo ah aabaha madaxweynaha Soomaaliya loogu bixiyo naaneystaan, kuwa qaar ayaa sheegayo inuu Cabdulaahi Jeclaa (Fromaggio) oo ah sheygii macaanaa ee Talyaaniga dalka keeni jiray sidaasna loogu bixiyey magacaas.
Haddaba dadki hore ayaa kuu sheegayo inuu Farmaajo heysto awoodii iyo jaceylkii aabihiis loo qabay sidoo kalana midda caawisay ayaa lagu sheegay inay aheyd 6-dii bil ee uu ciidamada awooda saray.
Madaxweynaha ayaa hadda heysto jaanis 4 sano ah oo uu ku rumeyn karo riyada dadka u heelan shaqadiisa.